मंसिर २८ बाट एमआरपी बन्द, के हो इ–राहदानी, कसले र कसरी लिने त ? (विस्तृत विवरणसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । नेपालको राहदानी विभागले इपासपोर्टको सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको छ । हाल मेशिन रिडेबल पासपोर्ट प्रचलनमा रहेकोमा मंसिर २८ गतेबाट विभागको मुख्य कार्यालयबाट सेवा लिँदा अनिवार्य रुपमा ईपासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने भएको छ ।
विभागले नारायणहिटीबाट एमआरपी वितरण गरिरहेकोमा टोकन दिन बन्द गरिसकेको छ । २८ गतेबाट सेवाग्राहीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ईपासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना विभागको छ ।
याे पनि पढ्नुस राहदानी विभागले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको विद्युतीय राहदानीको काम अलपत्र
राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर कसरी लिने?
(यो पढी सकेपछि मात्र फाराम भर्न शुरु गर्नु हुन)
यसको लागि अनलाइनबाट मिति र समय बुक गर्नु पर्दछ । जसले छिटो फर्म भरेर बुकिङ्ग गऱ्यो उसको पालो पहिले आउंछ । यही मंसिर १५ गते पछि निवेदनको संख्या उल्लेख्य बढाइएको छ । आज मंसिर १५ गतेबाट ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन बुकिङ्ग खुला गरिएको छ । अर्को हप्ताबाट काठमाडौं र भक्तपुरबाट सेबा शुरु गर्ने कार्यक्रम छ । उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राहदानी जारी कार्यको एक हप्ता अवलोकन गरेपछि अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवा शुरु गरिने छ । उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा एक हप्ता भित्रै तयारी भएको राहदानी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ ।
कसरी निवेदन दिने?
विभागको वेबसाइटको विद्युतीय राहदानीको लागि निवेदन (Apply for ePassport) भन्ने बटन थिंची प्रिइन्रोलमेन्ट पोर्टल मार्फत फाराम भरी तोकिएका सक्कल कागजात अपलोड गर्नु पर्दछ ।
अत: प्रिइन्रोलमेन्ट गर्नु पूर्व आफ्ना सक्कल कागजपत्र जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र, पुरानो मेशिन रिडेबल राहदानी लिएको भए त्यसको फोटो भएको पृष्ठ, शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार उमेर फरक परेको भए सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि कागजात स्क्यान गरेर तयारी अवस्थामा राख्नु होला । १६ बर्ष माथिका र नेपालमा निवेदन दिने सेवाग्राहीहरुको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर आवश्यक पर्ने हुनाले र जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा निवेदन दिई तुरुन्त राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन सकिने हुनाले सो लिई राख्नु हुन राहदानी विभाग अनुरोध गर्दछ ।
मोबाइल वा क्यामेराले खिचेको तस्विरको साइज ठूलो हुने, नमिलेको हुने तथा अनावश्यक ब्याकग्राउण्ड आएको हुन सक्ने हुनाले सकभर स्क्यानरको प्रयोग गरेर सक्कल कागजजात नै स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकताको अगाडि र पछाडि छुट्टाछुट्टै स्क्यान गर्नुपर्छ । करिब ३०० डिपिआई (डट पर इन्च) र ४०० के बी भन्दा कम हुने गरेर स्क्यान गऱ्यो भने साइज मिल्छ । धेरै नै कालो खालको डकुमेन्ट छ भने सो भन्दा कम डिपिआइ गरेर स्क्यान गर्न सकिन्छ । फोटोकपीबाट स्क्यान नगर्नु होला ।
आफूले नागरिकता लिएको वा बसाई सराई गरेको जिल्ला, राहदानी विभाग र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा राहदानीको लागि निवेदन दिन सकिन्छ । विद्युतीय राहदानीको लागि निवेदन संकलन गर्न शुरु गरिएका जिल्लाहरु र कुटनीतिक नियोगहरुको बारेमा जानकारी लिएर मात्र निवेदन दिनु होला । फाराम भरी सकेपछि मिति समय र निवेदन दिने ठाउँ छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ । भरिसकेको फाराम प्रिन्ट गर्दा आफूले बुक गरेको मिति र समय त्यसैमा प्रिन्ट भएको हुन्छ । फाराम भर्दा नाम, थर, जन्म मिति, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, जारी मिति आदि दोहोराई तेहेराई हेरेर राम्रोसšग भर्नु होला ।
आफूले बुक गरेको मिति र समयमा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग वा तोकिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र विदेशस्थित नियोगमा जानु पर्दछ । तोकिएको मिति र समयमा गएमा धेरै लाइन बस्न तथा कुर्न नपर्ने हुन्छ । अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था छिटै गरिने छ । हाल नगदबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी जानकारीको लागि विभागको वेबसाइट नियमित हेर्नु होला वा यस विभागको हटलाइन नम्बरहरु वा मोवाइल नं. ९८५१३२६८०१ र ९८५१३२६८०२ बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म जुनसुकै समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
ट्याग्स: E-Passprot, विद्युतीय राहदानी
काँग्रेस पदाधिकारी बैठक: यस्तो भो छलफल
सानिमा बैंक र अन्नपूर्ण केबलकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
मेरो वर्गीय दृष्टिकोण र देशप्रमको भावनामा कत्ति पनि विचलन आएको छैन: अर्थमन्त्री शर्मा